Koofiyadaha Baaskiilka Dabeysha ah ee Daba-Joogga ah oo leh Soosaarayaal iyo Badeecad Cover Cover Mesh Face Neck Kormeer
1. Shaashadda Qorraxda: Waxay leedahay 50 + UPF si looga hortago falaadhaha UV-ga ee waxyeellada leh isla markaana looga caawiyo ilaalinta maqaarkaaga, Maaddooyin gaar ah oo leh ka hortagga UV-ka oo ka gudbay baaritaanka UPF 50 +. taas oo ah ilaalinta UV ee dhabta ah. Ku darista Naqshadeynta Ballaaran iyo Dheer, Madaxaaga, Wejigaaga, Sankaaga iyo Qoorta Hore ayaa si fiican loo dabooli karaa. Waxay kaa ilaalinaysaa qorraxda inay gubato si ka wanaagsan. Qalalan Neefsasho Degdeg ah: Adoo adeegsanaya dhar nabar aad u sarreeya iyo qoyaan qoyan iyo naqshad mesh ballaaran, waxay kuu keenaysaa wax badan oo qabow iyo raaxo leh. Koofiyadu si dhakhso leh ayey u qalali kartaa dhaqitaanka ka dib
2. Milicsiga: cirifka iyo geesaha ayaa milicsanaya. Daboolka ugufiican ee socod socodka habeenkii, LOOGU TALAGALAY RAAXADA MAANKA - Koofiyadaha banaanka ee dabaysha ee daboolka leh mesh wejiga qoorta oo daboolaya mesh ayaa ah kuwo aad u fudud oo aad si fudud u illoobi doonto inaad xidhato. Waxay buuxisaa dhammaan shuruudaha raaxada iyo shaqeynta. Naqshad jilicsan iyo maareyn qoyaan weyn, waxaad ku kalsoonaan kartaa nimankan koofiyadaha ifa ee ka turjumaya inay kaa caawin doonaan inaad gaarto heerkaaga ugu fiican halka aad ka dhigeyso mid raaxo leh.
3. Bixinta Biyaha: Koofiyadaha isboorti ee aan qaabeysneyn ayaa ka hortagi kara roobka fudud ama iftiinka ku fida Saamaynta Lotus waxay ka dhigi doontaa daadadka biyaha si dabiici ah iyadoon la helin ifafaalaha daadashada muddo gaaban gudaheed! Kooxda Dhididka: dhididka ayaa ku habboon oo raaxo leh. Tolmada Crimping: Way ka adag tahay oo ku sii adkayn kartaa iyada oo lagu tolo daloolinta tolida. Isbedelka Ulaha Sixirka Tayada Sare: Ma jiraan badhano la isku hagaajin karo oo ku yaal dhabarka koofiyadda, daboolka waa la hagaajin karaa iyadoo loo eegayo wareegyada kala duwan ee madaxa. Naqshadaynta koofiyad cusub.
4. Ku Haboon: Koofiyadaha socodka dabaysha ee banaanka ayaa ku habboon kalluumeysiga banaanka ee Jirdhiska Jirdhiska Xerooyinka dhaadheer ee habeenkii. Sidaas hadiyado wanaagsan Of daboolka laab laabma, Dibadda Running Cap.
★ Ku soo dhawow amarkaaga OEM Bannaanka u socodka Baaskiilka Koofiyadaha iyo noocyo kale.
Hoos waa Kuweena kale Bannaanka u socodka Baaskiilka Koofiyadaha, fadlan noo sheeg koofiyadahaaga habboon ama soo dir nashqaddaada, mahadsanid.
Hore: UPF 50 + Koofiyadaha Dib-u-laabista Dibadda ee Koofiyadaha Sport ee aan habaysnayn ee Ragga iyo Haweenka
Xiga: Koofiyadaha Isboorti ee Neefsashada Neefta lagu hagaajin karo ee loogu talagalay Golf Tennis